နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: August 2007
Ratatouill & Evan Almighty
မနေ့က တစ်ကား ဒီနေ့တစ်ကား ကြည့်မိတယ်။ Sneak ရှိုးဆိုလို့ ၀င်ကြည့်တာ ။
ရီရတယ်။ မနေ့က ကြည့်မိတဲ့ကားက Ratatouille တဲ့။ အစားအသောက် အချက်အပြုတ် ၀ါသနာပါတဲ့ အနံ့ခံကောင်းတဲ့ ကြွက်ကလေး နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့က နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်မှာ အမှိုက်သိမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကောင်လေး နှစ်ယောက်အကြောင်းကို ကြည့်ချင်စဖွယ် ရီချင်စရာလေး ဖြစ်အောင် ရိုက်ထားတာပါ။
Finding Nemo နီမိုငါးလေးကို ရိုက်ကူးတဲ့ အဖွဲ့ကပါ။ ကောင်းပါတယ်။
Evan Almighty ကတော့ ဂျင်မ်ပာရေးပါဝင်တဲ့ Bruce Almighty ရဲ့ အဆက်လို့ ပြောလို့ ရသလို တစ်ကားစီလို့လဲ ပြောလို့ ရပါတယ်။ နောဧ (Noel)ကို God ဘုရားသခင်က Ark လှေကြီး ဆောက်ခိုင်းတဲ့ ခရစ်ယာန်ပုံပြင်အကြောင်း ကြားဖူးရင် ဒီကားကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ ကွန်ဂရက်အမတ်အဖြစ် လောလောလတ်လတ် အရွေးခံရတဲ့ တက်သစ်စ အမတ်ငယ်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဆုတောင်းအတိုင်း ဘုရားသခင်က ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ အခါ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:21 PM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Animation, Evan Almighty, movies, Ratatouille
ဒီနေ့ညနေပိုင်း စင်ကာပူ စံတော်ချိန် ၅း၅၀ လောက်မှာ လကြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်ဘာကြီးရဲ့ အရိပ်ထဲကို လမင်းကြီး ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်သွားမှာမို့လို့ တစ်နာရီကျော်ကျော် လပေါ်ကို နေမင်းအလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းကြီး အပြည့်ကြတ်တာကိုတော့ ဒီကမ်ဘာ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းက အာရှနိုင်ငံ တော်တော်များများ မြင်တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စင်ကာပူမှာတော့ လမင်းကြီး ရာဟုဖမ်းရကနေ လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းလောက်ကိုသာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ နီရဲနေတဲ့ လမင်းကို မြင်ကြရမှာပါ။ လိုက်ဖ်လွင့်တာကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာကနေ စင်ကာပူ စံတော်ချိန် ၅း၀၀ လောက်ကစပြီး အွန်လိုင်း Live Streaming လွင့်ပေးမှာမို့လို့ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း...။ တိုက်ဆိုင်မှုလား မသိဘူးနော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခရစ်နှစ် ၂၀၀၀ တုန်းက တစ်ခါ လအပြည့်ကြတ်ခဲ့ပြီး ၇ နှစ်အကြာမှာ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်ကြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Live Straming link : htt://www.discoverychannelasia.com/eclipse/
News Source : Here and Here
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:54 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Asia, Discovery, Earth, eclipse, Moon
IPhone Unlocking Success
ထူးခြားတဲ့ သတင်းလေးပါ။ နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ၁၇ နှစ်သားလေး George Hotz ပါ။
သူနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က နည်းပညာ ရူးသွပ်သူတစ်စုတို့ နာရီ ၅၀၀ ကြာ ကြိုးပမ်းမှုရဲ့ ရလာဒ် အဖြစ် IPhone ကို Unlocking လုပ်နိုင်ပါပြီ။
အဲဒီအတွက် AT&T ရဲ့ ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကိုသာ သုံးစွဲနိုင်ရာမှ တစ်ခြားသော ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့ ဖုန်းဆားဗစ်များပါ သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းဆားဗစ်ကိုလဲ သုံးစွဲနိုင်ပါပြီ။ ကောင်းပါလေရဲ့။ သူများ သားသမီးများ တော်ချက်။ အခု သူ Unlock လုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ ဖုန်းကို သူတို့ဆီက တစ်ယောက်က ဒေါ်လာ သုံးသောင်းတန် ကားတစ်စီး Nissan 350Z roadster and three, new 8GB iPhones နဲ့ အလဲအလှယ် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေး တော်တယ်။ ဒီမှာ သူတို့ ဘလော့ဂ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:20 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: ATT, George Hotz, iPhone, New Jersey geez, Unlocking
The Day of Pressing F5
အင်း..။ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး F5 ခလုတ်ကို နှိပ်ရတာ ခလုတ်လေးတောင် ပွန်းနေရှာပေါ့...။ စကားသာ ပြောတတ်မယ်ဆိုရင် ငါ့ကို သိပ်မနှိပ်ပါနဲ့လို့များ ပြောမလား မသိဘူး။ F5 ခလုတ်လေးရေ... ဒီအချိန်မှာ မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်တော်တော်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ကိုယ် တာဝန်ကျေပွန်ဖို့အတွက် မင်းအဖြည့်ခံဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါကွာ။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ဆောင်သွားသူကို လေးစားပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 6:35 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Let's Walk Till Journey Ends
အခုလတ်တလော ရင်ကို လာမှန်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ...။
လေးဖြူရဲ့ "ခဏလေးများ" စီးရီးစ်ထဲက ဖြစ်ပြီး
သီချင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ "ခရီးများ အဆုံးထိလျှောက်" ပါ။
တေးသွားနဲ့ စာသားကို လင်းလင်းက ရေးစပ်ထားပြီး အဆိုပိုင်းကိုတော့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီး လေးဖြူက သီဆိုထားပါတယ်။
Credit to Lynn Lynn, Lay Phyu
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:40 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: guitar, hallow, kana lay myarr, khayee myarr asone hti shauk, Lay Phyu, lynn lynn, moments, songs
Downside of Downloading
ကော်ပီရိုက် နည်းပညာ၊ မူပိုင်ခွင့် စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အနောက်နိုင်ငံတွေထက်ကို အမြင်ကတ်လောက်အောင် လိုက်နာတတ်တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် သုံးစွဲရတာ နည်းနည်း သတိထားရပါမယ်...။ ပိုင်းရိတ်မူဗွီများ၊ သီချင်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများကို တရားမ၀င် ကူးယူ ဆွဲချ သုံးစွဲတာကို အပြစ်ပေးတော့မယ်လို့ သိ၇ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် တူဒေး သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်...။ စာမျက်နှာ-၄ မှာ ပါတဲ့ သတင်းပါ။ Downside of Downloading ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါပါတယ်။ သတင်း အကျဉ်းကို တင်ပြရရင်တော့ အနုပညာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသူများအနေနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းပါတဲ့...။ တရားရုံးကနေပြီးတော့ စတားဟပ်ပ် အိုင်အက်စ်ပီကို သုံးစွဲသူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖွင့်ပြဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ စတားဟပ်ပ်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူ တစ်ထောင်ကျော်လောက်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံက လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် Anime' ကို အင်တာနက်ကနေ တရားမ၀င် Download လုပ်ယူခဲ့လို့ပါတဲ့။ အဆိုပါ တရားနိုင် ကာတွန်းကား Anime' ဖြန့်ချိသူ ကတော့ လျော်ကြေးအနေနဲ့ ဒီ လုပ်သူ တစ်ဦးချင်းစီကနေ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ စီကို ရရှိမယ့်အပြင် နောက်နောင်ကို သူ့ကာတွန်းကားတွေကို တရားမ၀င် ကူးယူ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်တာတွေ မပြုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ခံဝန်ချက် ရရှိပါမယ်...။
ဒီဖြစ်ရပါအပေါ် သဘောတူမျှတဲ့သူတွေ ရှိသလို သဘောထား ကွဲလွဲသူများလဲ ရှိပါတယ်...။ သဘောတူသူ အများစုကတော့ အနုပညာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ မူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ထုတ်လုပ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ (သူတို့စီပွားရေးကိုး... တူမှာပေါ့...။)
ဥရောပမှာတော့ အိုင်အက်စ်ပီတွေကို တရားရုံးကနေ သုံးစွဲသူအချက်အလက်များကို အတင်းအကျပ် တောင်းဆိုလို့ မရပါဘူးတဲ့...။
နန်ယန်း ဥပဒေ စီမံရေးရာ ဒါရိုက်တာ (ဘာသာပြန်တာ မှန်လား မှားလားတော့ မသိ...။ ရေးထားတာကတော့ Law Managing Director တဲ့...။) ပြောတာကတော့ တရားရုံးကနေ သံသယ ၇ှိဖွယ် အင်တာနက်ကနေ တရားမ၀င် ကူးယူမှုတွေကို စစ်ဆေးချင်တိုင်း မိမိဖေါက်သည်တွေရဲ့ အချက်အလက်ကို ခဏခဏ အတောင်းခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ရှောင်ချင်ကြတယ်၊ မမျှော်လင့်ကြဖူးလို့ ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆိုပါ တရားမ၀င် ဆွဲချ ကူးယူမှုများ အဆမတန် များပြားလာမှသာ တောင်းယူသင့်တယ်လို့ ၄င်းရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ပြောပြပါတယ်။ တရားရုံးကလဲ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ တောင်းခံတဲ့ နည်းလမ်း အပြင် တစ်ခြား လက်ခံနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေသင့်ကြောင့် ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အိုင်အက်စ်ပီကနေတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများထံ သတိပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ၀ဘ်ဆိုဒ်(Web site)ကို ဘလော့က်(Block) လုပ်လိုက်ခြင်း စတဲ့ အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့လဲ အကြံ ပြုထားပါသေးတယ်...။
(တော်ပြီကွယ်...။ ရေးရတာ လက်ညောင်းတယ်...။ အကျယ်သိချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားဖတ်တော့...။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:23 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Anime', copyright, downloading, Illegal, ISP, piracy, today
Stats Counter Setting
သိပြီးသား ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပါ...။ ကိုယ့်ဆိုဒ်မှာ လူဝင်ကြည့်ရင် ဘယ်နှစ်ယောက် ၀င်ကြည့်ပြီးပြီလဲ ဆိုတာကို မှတ်ပေးတဲ့ ကောင်တာအကြောင်းလေ...။ အများအားဖြင့် စတက်ကောင်တာကို (statcounter) သုံးကြတာ များတယ်...။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခု သတိပြုရမှာက ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ၀င် ၀င်ပြင်ရင် ပြင်တဲ့အကြိမ်အလျောက် ကောင်တာက တက်တက်သွားတယ်...။ မတက်ချင်ရင် စတက်ကောင်တာရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်ထဲက Setting ထဲမှာ ကိုယ့်အိုင်ပီကို Block လုပ်လိုက်လို့ရတယ်...။ ဒီလို လုပ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ကိုယ်ကလွဲပြီး လူဘယ်နှစ်ယောက် ၀င်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ အရေအတွက်ကို အမှန်အကန် ရတာပေါ့...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:43 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: counter, setting, statcounter, stats
Rush Hour3: Rotten Tomatoes
Full resolution (432 × 627 pixel, file size: 99 KB, MIME type: image/jpeg)
ဒီနေ့ ဂျက်ကီချန်းပါတဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လာတယ်...။ Rush Hour အရမ်းရီရတာပဲ...။ ကောင်းတယ်ဗျာ...။ ခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရီရတဲ့ အရှေ့တိုင်း ဟာသရသပါတဲ့ ကားတွေ မကြည့်ရတာ အတော်တောင်ကြာနေပြီ...။ သွားကြည့်ကြပါဦးလို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်...။ အဲဒီထဲက တရုတ်သိုင်းကျောင်းမှာ သိုင်းဆရာနဲ့ ခရစ်စ်နဲ့ စကားမပေါက်တာ၊ နားလည်မှုလွဲတာတွေက တော်တော်ရီရတာပဲ...။
Chris - Who are you?
Teacher 1 - I'm "Yeu".
Chris - How can you be me ? (turn to another teacher and ask)Who are you?
Teacher2- I'm "Mee".
Chris - (Frustrating)I know you are you.
ချစ်ကဲန်းနုဂက်နဲ့ ကုဒ်နဲ့ ဂျက်ကီချန်းနဲ့ ရောသောက်ရတာ တော်တော်ကောင်းတာပဲ...။ သီးတောင် သီးတယ်...။ ဇာတ်ဆောင် ခလေးမလေးတောင် အတော်ကြီးလာပြီပဲ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:02 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: 3, action, Chan, chinese, comedy, Hour, Jackie, movie, Rush
Shan New Year Celebration in Muse, Shan State, Myanmar
ရှမ်းအမျိုးသားများရဲ့ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျင်းပကြတဲ့ ပွဲလေးတစ်ပွဲပါ...။
ရှမ်းအမျိုးသားများရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဟာ အများအားဖြင့် အနောက်တိုင်း ပြက်ခဒိန်တွေရဲ့ ၁၁ လ ပိုင်းနှောင်းရက်တွေမှာ ကြုံတတ်ပါတယ်...။
ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတိုင်းမှာ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တာရယ်၊ မကြုံကြိုက်တာရယ်ကြောင့် ကျွန်တော် ပါဝင်ဆင်နွဲခွင့် မကြုံတာ များပါတယ်...။
ဒါပေမဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပခါနီးလေ သတင်းတွေ ကြားရပြီဆိုရင်ဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားတတ်လေ့ ရှိပါတယ်...။
အောက်က လင့်ခ်တွေကတော့ ယူကျူ့ပ်ပေါ်မှာ တင်ထားတာလေးတွေ တွေ့လို့ အမိမြေ ရှမ်းပြည်ကို သတိရစိတ်နဲ့ အမှတ်တရ ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
ရှမ်းပြည် အထက်ပိုင်း (မြောက်ပိုင်းလို့ ပြောရရင် ပို အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါ့...။)က မန်းလေးကနေ တရုတ်ပြည်ကို သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ မူဆယ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသော ဗွီဒီယိုကလစ်များကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်...။ ဗွီဒီယိုတင်ပေးသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...။ရှမ်းရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ ရှမ်းပျိုဖြူလေးများရဲ့ ရိုးရာ အကကို အောက်က ကလစ်မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီကလစ်ကတော့ ရှမ်းအဆိုတော်များ စုပေါင်းပြီး ၀ိုင်းဖွဲ့သီဆိုတားတဲ့ ရိုးရာနဲ့ ခေတ်ဟန်ရှမ်းသီချင်းကို ပေါင်းစပ် သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းပါ...။
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပမယ့် ကွင်းပြင်ဆီကို ကျေးရွာ ရပ်ကွက်အလိုက် ရှမ်းအမျိုးသား ကြီးကြီးငယ်ငယ်များ လာရောက်စုပေါင်းနေကြတဲ့ ကလစ် ဖြစ်ပါတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:50 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: dance, new year, shan, song, tai, traditional
Shan New Year Celebration in Muse, Shan State, Mya...